နေအိမ် » စကားတာ » Angry Birds ဂိမ်းအာကာသ HD ကို
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Angry Birds ဂိမ်းအာကာသ HD ကို
ဖေါ်ပြချက်: ဧရာလက်သည်းသူတို့ဥခိုးပြီးနောက်, Angry Birds ဂိမ်းဟာ wormhole သို့ လိုက်. နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အသစ်ကတော့ galaxy အတွက် floating ရှာတွေ့ - အာကာသဝက်ကဝိုင်း! ကံကောင်းတာကထို Angry Birds ဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စူပါအင်အားကြီးများ ...
ကစား: 846,442 tag ကို: အန်းဂရီးဘားဒ်စ်, အမျက်တော် ထွက်. ငှက်, အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ဂိမ်း, အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အာကာသ, အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် Rio
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ပိုမိုမြင့်မားပျံသန်း
Angry Birds ဂိမ်းပျံသန်းဖို့ Space Bar ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အထက်ပျံသန်း, မြှား key ကိုရွှေ့ကျန်ရစ်သို့မဟုတ်ညာဘက်ကိုကူညီပါမြင့်ကိုပိုရမှတ်များအရရ။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်မကောင်းတဲ့ piggy ကိုဖကျြဆီး
Angry Birds ဂိမ်းအားလုံး piggy ပျံသန်းရိုက်ကူးကူညီပါ။ ရိုက်ကူးဖို့သေနတ်ထိန်းချုပ်ဖို့ mouse ကိုသုံးပါ။ သင်သည်သင်၏လမ်းဖြတ်ကူးတိုင်း piggy သတ်ပစ်ရန် 30 စက္ကန့်ရှိသည်။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ဘဏ္ဍာကိုရှာပါ
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ကူညီရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကြကုန်အံ့, ထိုဘဏ္ဍာကိုရှာတွေ့ဘို့အအန္တာတိကဆီးနှင်းအတွက်များစွာသောဘဏ္ဍာကို here.The ရှိအမျက် ထွက်. ငှက်တို့သည်မိုဃ်းပွင့်သို့ရောက်ကြ၏။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်2သွား
Angry Birds ဂိမ်းကို သွား. Play! အွန်လိုင်း, Angry ငှက်နှင့် piggy သူတို့၏အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ Kart ပြိုင်ကားများအတွက်အဆင်သင့်ရတဲ့ကြသည်! သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်အများစုဟာဒီပြိုင်ကားဂိမ်းအသီးအသီးအခြားယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် go: အန္တရာယ်ရှိထောင်ချောက်
Angry Birds ဂိမ်းကိုလမ်းအပေါင်းတို့၌ရွှေကြက်ဥနှင့်ပစ္စည်းများစုဆောင်း, သင်ဆိုး piggy ကစုဆောင်းလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အစာရှောင်ကို run ရန်ရှိသည်ကိုကူညီပါ။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အပြေးပြိုင်ပွဲသွား
တစ်ဦးက Highly စိတ်အားထက်သန်ဂိမ်းကိုသင့်အာရုံကြွယ်ဝစေပြန်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအမျက် ထွက်. ငှက်ဇာတ်ကောင်အားလုံး 25 ကွာခြားချက်များနှင့်အတူ5အေးမြနေရာများမှာသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တစ်ခုချင်းစီ other.Select သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ဆန့်ကျင် Racing ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်အံ့သြဖွယ်ကားများနှင့်အတူထား
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ရွှေကြက်ဥ
Angry Bird ကို finish ကိုအားလုံးအဆင့်ဆင့်ကိုကူညီပါနှင့်ဤဂိမ်းကြက်ဥကိုစုဆောင်းပါ။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အာကာသဗိုလ်ကြီး
Angry Birds ဂိမ်းမှာအာကာသယာဉ်အာကာသအတွင်းကြက်ဥစုဆောင်းဖို့ရေလွှမ်းမိုးသောအတားအဆီးများနှင့်မကောင်းတဲ့ piggy ဖြတ်ကျော်မောင်းနှင်။ ရိုက်ကူးဖို့ space bar ကိုသုံးပျံသန်းဖို့လက်ဝဲ mouse ကိုသုံးပါ
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ရဲတိုက်တိုက်ခိုက်
Angry Birds ဂိမ်းကသူ့ငှက်ဥအားဖြင့်အားလုံးရဲတိုက်ကိုဖကျြဆီးကိုကူညီပါ။ သငျသညျကြက်ဥတွန်းအားပေးရန် Space Bar ကိုသုံးလော့။ ထို Angry Birds ဂိမ်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ arrow key
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်သူရဲကောင်းရဟတ်ယာဉ်
ဒီဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့မစ်ရှင်ကယ်ဆယ်ရေးရည်းစားမှရဟတ်ယာဉ်မောင်း Angry Bird ကိုကူညီရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးကြသည်။ ကစားရန် AWSD keys ကိုသုံးပါ။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အလုအယက်အလုအယက်ပြေး
Angry Birds ဂိမ်း Rush Rush Rush: Angry Birds ဂိမ်းထဲကနေသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင် Choose ငှက်သို့မဟုတ်ဝက်နှင့်တစ်ဦးထိခိုက်လွယ်မော်တော်ယာဉ်စေပါတယ်။ တောငျအပွညျ့အဝတစ်ဦးရှုခင်းအဘို့သကြားလုံးစုဆောင်းနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ဟန်ချက် Keep ။ အပြေးပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ!
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် x'mas စစ်
ဒီခရစ်စမတ်အဘို့အ Angry Birds ဂိမ်းကစားပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုး piggy ၏တိုက်ခိုက်မှုရှေ့တော်၌ထိုမြို့ကာကွယ်ပေးရန် Angry Birds ဂိမ်း, ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများနှင့်မကောင်းသော piggy ဆင်းရိုက် Angry Birds ဂိမ်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ mouse ကိုသုံးလော့။ သငျသညျကစားရန်အဘို့များစွာသောအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Angry Birds ဂိမ်းပို့ဆောင်ရေး Play ။ ဂိမ်းကစားရန် Arrow key တွေကိုကိုသုံး
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ဟယ်လို
Angry Birds ဂိမ်းငှက်ဟယ်လိုဝင်း၏အပေါငျးတို့သစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရန်ကိုကူညီပါ။ အပိုဆုကြေးငွေဖမ်းပြီးနှင့်သင့်ငှက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်ဤသို့အားလုံးအစိမ်းရောင်ဝက်ကိုဖကျြဆီးပါစေရန်ပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်ဤနေရာသို့သွားရန်။
အမျက်တော် ထွက်. ငှက်ဟယ်လိုသစ်တော
Angry Birds ဂိမ်းအားလုံးရွှေဖရုံသီးနှင့်မကောင်းပါ piggy ရိုက်ကူးကူညီပါ။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ငှက်ဥရ
ကြိုးခုန် Angry Birds ဂိမ်း, Angry Birds ဂိမ်းတတ်နိုင်သမျှမြင့်မြင့်ခုန်ဖို့ကူညီခြင်းနှင့်အရေအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့ပိုကြက်ဥကိုစုဆောင်းပါ။ တက်ပါဝါရန်, ဖွင့်လှစ်အချက်တွေကိုရွေးဖို့ Press မှဒဗလျူသို့မဟုတ် Up ကိုသော့ချက်။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်သွားသွား
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အသစ် Angry Birds ဂိမ်းကစားပွဲကဒီမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အများဆုံးကိုခစျြငှကျတို့နှင့်အတူ Racing လိမ့်မည်သည့်အတွက်ဂိမ်းတစ်ခု Mario Kart အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Angry Birds Kart ၏တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောဂိမ်း၌ဤအံ့သြဖွယ်အပြေးပြိုင်ပွဲအဘို့သင့်မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပါ။ ကျမတို့ကလည်းဘယ်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်စဉ်းစားရုံအခါ,
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်တိုက်ခိုက်နေ
ဝက်ငှက်အကြားထာဝရရန်ပွဲအချိန်ကြာမြင့်စွာကလွန်ခဲ့တဲ့လွှတ်ခဲ့သည်။ စစ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအကြမ်းဖက်သူတို့ကို, ပိုမိုအားကောင်း angrier နှင့်အများကြီးပိုလုပ်လေ၏။ အမျက်ဒေါသအားဖြင့်မဖျက်ဆီး, အနည်းငယ်သောငှက်များကျန်ကြွင်းသော်လည်း, သူတို့သည်သူတို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသောအရာကိုတွေ့ပါသည်အထိသူတို့က, အရှုံးမပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်သူရဲကောင်းကယ်ဆယ်ရေး
မကောင်းတဲ့ဝက် comming သည်အန္တရာယ်အတွက်ပန်းရောင်အမျက် ထွက်. ငှက်, ။ ကူညီပါ! squealing အပန်းရောင်အမျက် ထွက်. ငှက်တို့သည်! ငါကဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို, မစိုးရိမ်ပါနဲ့! ဧဒုံ Angry Birds ရုံကာလ၌သင်တို့ကိုငါကာကွယ်လိမ့်မည်ညျထငျရှား! အားလုံးမကောင်းတဲ့ဝက် Beat!
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အာကာသလဲလှယ်
တစ်တန်းထဲမှာအတူတူပင်မျိုး3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအက္ခရာများရှိပါတယ်နိုင်အောင်, Angry Birds ဂိမ်းအာကာသကနေငှက်မစီစဉ်ပါ။ တစ်ငှက်ရွှေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုကလစ်ပြီးတော့လက်ဝဲ, လက်ျာ, အထက်သို့မဟုတ်သင်ဏနှိပ်လိုက်ကိုပထမဦးဆုံးငှက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင်းအခြားကို click ရန်
ကိုလှိမ့်အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အာကာသ
Angry Birds ဂိမ်းကိုလှိမ့်နေတဲ့ပျော်စရာရူပဗေဒဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့အလုပ်ကသူ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အားလုံးကိုနှင်းဆီပန်းရရန်အထီးအမျက် ထွက်. ငှက်ကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကိုလှိမ့်မြှားခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် 2013 ခုနှစ်, သရဲအခြောက် hogs hd ကို
မကြာမီ Angry Birds ဂိမ်းကို 2013 သရဲခြောက်သော Hogs HD ကိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် Angry Birds ဂိမ်းကို 2013 သရဲခြောက်သော Hogs HD ကိုဗီဒီယို watch, ပို Hack Angry Birds ဂိမ်းကို 2013 သရဲခြောက်သော Hogs HD ကို Comming! သငျသညျ၏တစ္ဆေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှက hue ထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးတစ္ဆေဝက်ရဲတိုက်, တစ်ဂိမ်းအသစ်မြင်ကွင်းများမှဒီဂိမ်း
အမျက်တော် ထွက်. ငှက်စူပါပဟေဠိ
သူတို့ကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်တူသောအမျက် ထွက်. ငှက်အုပ်စုများအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ တစ်ခုလုံးကိုဘုတ်အဖွဲ့ကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားပါ
အမျက်တော် ထွက်. ငှက်ဇနီးရှာခြင်းငှါ
မကောင်းတဲ့ piggy သည်သေခြင်းကစားသမားကိုသတ်
ဆိုး piggy သခွေငျးတရားကစားသမားကိုသတ်။ ဒီမစ်ရှင်၌သင်တို့ကိုအောင်မြင်စွာသူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ဖို့အလုပ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်အချိန်အဆညှိသင့်ရဲ့တုတ်ကျင်းသို့အစာရှောငျလာကွသောရန်သူများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်တိကျသောဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်မကောင်းတဲ့ piggy ချိန်ခွင်လျှာ
နှစ်ဦးစလုံးဝက်တတ်နိုင်သမျှမြင့်မြင့်ခုန်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုကူညီရပေမည်။ တစ်ကြိမ်မှာတစ်ခုစီကိုဝက်ခုန်ဖို့, ထိုထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက် rocker ရွှေ့ပြီးတော့, ခုန် mouse ကိုကလစ်အသုံးပြုခြင်း။ ဂိမ်းထဲမှာသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ကြောင်းတ္ထု, အထူးသဖြင့်ကြက်ဥ, ဖရုံသီးနှင့်ကိုင်ဆောင်သောစုဆောင်းပါ။ သင်မှာ .... ရှိသည်